प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी कसले पाउला ? - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी कसले पाउला ?
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि पुर्व सञ्चार सचिव सुशील घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणकै बरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले हटाएका तत्कालीन अध्यक्ष झालाई पुनः अध्यक्षमा ल्याउन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले दिगम्बर झालाई पुनः अध्यक्षमा ल्याउन नियमबिपरित मन्त्रीपरिषदमा उनको नाम मात्रै सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिसको विरोध आएपछि मन्त्रालयले अध्यक्ष पदका लागि खुल्ला आवेदन खोलेको थियो । उक्त आवेदनका लागि प्राधिकरणमा कार्यरत ३ जनालगायत अन्य १२ जनाले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदकहरुले आवेदन दिएको १ हप्तापछि मन्त्रालयले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
यस्तो छ, अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था
प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक बजार व्यवस्थापन, लेखा, कानुनी क्षेत्रमा तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको एक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले सो पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने र आवेदकहरूमध्ये तीनजनालाई अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसकै आधारमा सरकारले अध्यक्षको नियुक्ति गर्ने गरिएको छ ।
कसको संभावना अधिक ?
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शुसिल घिमिरे यसअघि संचार मन्त्रालयमै सचिवको अनुभव लिईसकेका व्यक्ति हुन् । उनी हाल पारिवारिक माहौलमा नै व्यस्त रहेकोमा उनी पनि अध्यक्ष पदको दाबी गर्न आएका हुन् । पुर्व सचिव घिमिरे सम्भवत सबैभन्दा लामो समय सञ्चार मन्त्रालयमा उच्च ओहोदामा रहने कर्मचारी हुन् । उनले सञ्चार मन्त्रालयमा ५ बर्ष सह सचिव र ३ बर्ष सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । मन्त्रालयमा रहदा दुरसञ्चार नीति निर्माणको क्रममा संयोजकको भुमिका निर्वाह गरेका छन् ।
त्यस्तै सिफारिस भएका पुरुषोत्तम खनाल हाल वरिष्ठ निर्देशकको रुपमा प्राधिकरणमा नै कार्यरत छन् । उनी मन्त्रि बाँस्कोटासँग समदुरीमा रहेर सम्बन्ध कायम गर्ने व्यक्तिको रुपमा प्राधिकरण भित्र परिचित छन् ।
सिफारिसमा परेका दिगम्बर झा यसअघि पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष भई दुई कार्यकाल बिताएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा कार्यरत रहँदा वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै उनलाई पनि पदमुक्त गरेको थियो । यसअघिको सरकारले उनको कार्यकाल थप गर्दा विवादमा मुछिएका झा यो सरकारले पदमुक्त गरेको हो । उनले पदमुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेर अन्तरिम आदेश जारी गराएपनि पछि मुद्धा फिर्ता लिएका थिए । झा यसअघि नेपाल आयल निगममा पनि प्रबन्ध निर्देशक भईसकेका व्यक्ति हुन् । पूर्व अध्यक्ष झालाई मन्त्रि बास्कोटाद्धारा यसअघि पनि नियुक्ति गर्ने पटक पटक प्रयास भएको थियो ।